Odeeffannoo: PPn dhiyootti filannoo geggeessuu barbaaddi – Ayyaantuu Online
HomeEnglishOdeeffannoo: PPn dhiyootti filannoo geggeessuu barbaaddi
The era where false doctrines such as the prosperity gospel / name-it and claim-it gospel have affected the entire world and the church. A person who owns more possessions and has more money be defined as being more spiritual and more Christ-like than a person who owns less possessions and money
Waltajjiin hatattamaa Fulbaana 3-9/2013 (ALH) ni geggeeffama. Dhimma filannoo irratti. PPn dhiyootti filannoo geggeessuu barbaaddi. Dhimma filannoof isaan kakaase:
– “Hoggana ABO keessatti gidduu isaaniitti walshakkii uumneerra. Ta’us Hayyu Duree ABO haaraa as baasuun nuuf hin milkoofne. Hogganoonni ABO gariin mana hidhaa waan jiraniif amma dafnee yeroo gabaabaatti filannoo yoo labsine ni injifanna. ABOn yeroo gabaabaa kanatti dafnee filannoo yoo geggeessina jenne ABOn bakka bu’oota dhiyeeffachuu hin danda’u. Dhiibbaa barbaachisu goonee filannoo geggeessuu qabna.
– WBO dhabamsiisuu qabna. TPLF irratti duuluu kan dhiifneef humni biraa sodaachisaa ta’e ABO fi WBO waan ta’eefi. TPLF irratti yoo lola labsine ABO fi WBOn ni jabaatu. Isaan yoo jabaatan nu nyaatu. Kanaafuu haala barbaachisu uumnee WBO irratti duuluu qabna.
Humna jiruun WBOtti bobba’uu qabna. Caasaa waraanaa keenyas qulqulleeffachuu qabna. Akkasumas caasaan bulchiinsaa niihaaroma. Alamuu Simee eebba misoomaa irratti argamuun miidiyaatti mullachaa kan jiruuf perezedaanti naannoo oromiyaa akka ta’uufidha.
– Paartiin MADIRAK oneera. Pr.Bayyaneen badhaadhinaan muudameera. KFOn nun yaaddessu Mararaa qofaatu jira. Caasaalee isaanii haftes irratti hojjenna.
Haala amma jiru kanaan amma jenne amma filannoo labsuun nii injifanna sana booda waraanaan buluudha. kan dide dhabamsiisuudha.
Waltajjii guyyaa jahaaf turu kana kan hirmaatu kaabinee badhaadhinaa sadarkaa ol-aanaa irra jiraniidha.isaan booda waltajjii kaabinee sadarkaa gadirra jirantu itti fufa”
Shirri kun hunduu Qabsoo Bilisummaa Oromoo laamshessuuf aggaamame. Kan falmatee ofirraa qolatu uummata!
FILANNOO, FILANNOO BIRAA HIN QABNEE !!!
FILANNOO, FILANNOO BIRAA HIN QABNEE !!! SEENAA Y.G (2005) - Bitootessa 22, 2018 Amnaa dheeraa…